GPS020W -OMG GPS Tracker Bukela iAlzheimer Dementia yabaguli abaDala | I-Singapore ephezulu ye-Mini GPS Tracker ye-Autism / Autistic yaBantwana kunye neDementia yabantu abadala
I-GPS020W-I-GPS yokuKhangela umkhondo kwi-Alzheimer Dementia yaBantu abadala abaNtu yenzelwe ukunika amalungu osapho okanye abanakekeli uxolo lwengqondo malunga nomzali okhulileyo apho akhoyo. Akusoloko kulula ukugcina omabini amehlo kubantu abakhutheleyo, kwaye ukulandelwa kwe-GPS yeyona ndlela ilandelayo yokugcina umkhondo wabo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwabo.
tag: I-tracker ye-gps yesifo sengqondo esiyingozi, umkhondo wezigulana zengqondo, isifo sengqondo esixhalabisayo, umkhondo we-gps wabantu abadala, isixhobo sokulandela umkhondo kubantu abadala, umkhondo wabadala, umkhondo we-gps, isixhobo sokulandela umkhondo, isixhobo sokulandela umkhondo we-gps, umkhondo we-mini gps, umkhondo we-gps omncinci, umkhondo we-GPS we-gps, isixhobo se-gps, indawo yokulandela umkhondo we-gps, isixhobo sendlela yokulandela umkhondo, eyona nto ilandelayo umkhondo we-gps, inkqubo yokulandela umkhondo we-gps.
* S $ 198 (iwaranti yee-6 zenyanga) - usu $ 248
Whatsapp + 65 8333 4466 ku-oda !!
Ukuhanjiswa kweSuku olufanayo (Myalelo namhlanje kwaye fumana into yakho namhlanje) - S $ 15
I-Stylish GPS Watch sisizukulwana esitsha se-GPS tracker gadget eneendlela ezininzi zokubeka GPS + WIFI + LBS, enokusetyenziselwa abantwana, abadala, abadala, abakhubazekileyo njl njl. Isebenza ngokugqibeleleyo naphi na kwihlabathi liphela. Le gadget incinci ayisiyiyo kuphela iwotshi, umkhondo we-GPS, inokusebenza njengeselula engenza iifowuni! Ikwaxhotyiswe ngemisebenzi, enje ngekhamera, inyathelo lokulwa, ingxelo yemozulu, umnxeba, ukujonga ngelizwi elikude, umkhondo wendlela yomlando, ifreyimi ye-geo, ingxoxo yelizwi njalo njalo!
I-GPS + I-WIFI + I-LBS Iimodeli zokumisa ezininzi: Isixhobo singazijonga ngokuzenzekelayo inethiwekhi yokumisa kwaye sitshintshe indlela yokumisa ngokuzenzekelayo kwakhona, ngaphakathi usebenzisa i-WIFI / LBS imo yokumisa ngenkqubo ngaphandle kwemodi yokubeka i-GPS. (Inkxaso yeGoogle Map)
Umnxeba wefowni: Ngaphandle kokukhonza njenge-GPS tracker, isixhobo sinokusebenza njengomnxeba ukwenza ifowuni!
Umzila Wemizila Yeembali (IRekhodi Yemilenze): Indlela yokuhamba ye-GPS umnini kwiinyanga ze-3 zakutsha ziza kubhalwa kwi-check, ukuze ukwazi ukulandelela zonke iindawo zeGPS eziye zafika kuyo, kulula ukufumana ezilahlekileyo, ezifana nabantwana bakho, abakhulileyo, iintsapho ezizithandayo okanye imithwalo, izinto ezixabisekileyo, iimfuyo, iimoto, izithuthuthu kunye nokunye.
I-Alarm yeFowuni (i-Geo-fence): Ungasetha indawo ekhuselekileyo (umgcini we-GPS njengendawo) ukugcina umlindi ophakathi kwendawo, xa umnikazi we-GPS ephuma kwindawo ephephile, ifowuni izakuphakamisa ngokuzenzekelayo i-alamu kwifowuni yakho yesicelo.
Ukuqapha kwezwi elide (Mamela): Kwisetyenziso-sicelo, unokuseta inombolo yokubeka iliso, xa ukhetha umsebenzi we "Remote Voice Monitoring", umyalelo uya kuthunyelwa kwidivaysi yeGPS emva koko ifowuni iya kubiza inombolo yokubeka ngokuzenzekelayo, (ukuba ungumnikazi yenkalo yokubeka iliso) uze ucofa uphendule umnxeba, kwaye unokuva izandi malunga nefowuni ye-GPS ngelixa ihlangothi lwedivayisi alikwazi ukukuva nonke! Ngalo msebenzi, xa inkwenkwe yakho inesimo esiyingozi okanye isilwanyana sakho sikude nawe, unokuva oko kwenzekayo malunga nabo!
I-1.54 intshi Yesikrini sokuthinta.
Ikhamela: Ncedisa ukuthatha isithombe, ukuzonwabisa kunye nefashoni.
Counter Counter: iqela elifanelekileyo lemidlalo kunye nempilo.
Mozulu: yipompo enye ukufumana imeko yemozulu yendawo.
Ingxoxo yezwi: Unokuthetha ngezwi kunye nabathandekayo bakho usebenzisa i-watch watch.
Akukho ntlawulo yenyanga (kuxhaswa kokubili kokuhlawulwa kwangaphambili kunye nokuhlawulwa kweposi).
Iindidi ze-3 zendlela yokusebenza. Umsebenzisi unako ukhetha ukusetha kwifowuni ye-APP umsebenzi wesofthiwe ukukhetha indlela yokusebenza.
1. Ukubeka ngokukhawuleza (i-1 iminithi): Ixesha le-1 lihlaziya ulwazi lwendawo yendawo.
2. Isikhundla esifanelekileyo (imizuzu ye-10): Imizuzu ye-10 ihlaziya ulwazi lwendawo.
3. Gcina ukubeka umbane (iyure): Ixesha leeyure ze-1 lihlaziya ulwazi lwendawo.
Kubonakala: Isalathisi esilungileyo se-eco-friendly watch band kunye ne-aluminium esilindi se-watch watch yenza kube lula kakhulu kunye nesicatshulwa; Impahla ekhethekileyo yokucwangcisa imveliso yenza ukuba kuhle ukuba uzive kwaye ujabule kwiso.
Izicelo ezininzi: Olungiselelwe abantwana, abantu abadala, abantu abadala, abakhubazekileyo, njl.
Ifowuni yeFree iyasebenza: I-Android kunye ne-IOS, (isicelo sobomi kunye nenkonzo yesikhulumi samahhala!)
Ixesha elide lokulinda: Kukhethwa ixesha lokusebenza kwe3 kwi-device ukubeka idatha yokulayishwa: i-1 min, i-10 min, i-1 iyure. I-interval short, ibhetri ubomi bude. Ikhefu le-1 min, ibhetri ehlala kwixesha le-1; I-10 min, ibhetri ihlala ngeentsuku ze-2-4; Ixesha le-1, ibhetri ihlala ngeentsuku ze-5-7.
Imibala: I-Pink, Black, Brown, Blue
Uhlobo: Design Stylish Design
Ukuphindaphinda: I-GSM: I-900 / 1900MHz I-WCDMA: 900 / 2100MHz
GSM: I-850 / 1900MHz: WCDMA: 850 / 1900MHz (ngokuzithandela)
Umbala: Omnyama, uBrown
I-eriyali yeGPS: I-antenna ephakamileyo yokuvakaliswa kwe-ceramic
I-antenna ye-GSM: FPC
ISIM khadi slot: I slot enye
Inzwa ye-G: ezixhaswayo
I / O port: USB izibuko
Isiginali ye-GPS: L1,1575.42MHz C / A khowudi
Iigesi zeGPS: Iifayile ze20
I-chip chip efumana ubuntununtunu: Ulwaphulo lokulandelela: -165dBm, uvelwano lokufumana: -148dBm
I-GPS Ukubeka ngokuchanekileyo: 5 ~ 15m
Umndilili okhoyo ngoku: <2.5 mA
Ukushisa: -20 ~ 70 ℃
Ukuthotywa: I-5% ukuya ku-95% ayikho impazamo
yokuqinisekisa: CE, ROHS, FCC kunye njl
I-eriyali yeGPS: Ubunzulu obuphakamileyo obukwakhelwe ngaphakathi kwi-FPC
I-antenna ye-GSM: I-antenna ye-PIFA eneeyure ezine
Inzwa ye-G: ehambelanayo
OS inkxaso: I-Android 2.3 nangaphezulu, iOS 5.0 nangaphezulu
2854 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-23 Namhlanje
I-GPS043D - i-OMG ye-GPS Tracker Pendant / i-Keychain ye…
iHelp 2.0 - 3G / 4G GPS yokuKhangelwa kwesitshixo, Ukungena manzi…
I-OMG yaBadala yokuBek 'esweni i-GPS yokuKhangela umkhondo (GPS027)